मलाई सबै केटा मन पर्छ तर विप्लवको छोरा साह्रै मन पर्छ ! – Taja Khawar
बिहिबार ०५ जेठ २०७९
भर्खरै वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएर घर पुग्दा ‘एउटा मतपेटिका गन्न छुटेछ’ भन्ने खबर आएपछि
मतगणना सकेर परिणाम घोषणा भइसके*पछि सिल नै नखोलेको मत*पेटिका भेटियो…
५५२ पालिकाको मत परिणाम : कांग्रेस २४६ पालिकासहित पहिलो., एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो…
आज सचे’त हुन आग्रह., यि स्था’नमा हु’नेछन् ठूलो चट्याङ्सहित हावाहुरीको वर्षा……
भर्खरै विवाद सल्टिएपछि धरानमा मतगणना शुरु., रुखभन्दा लौरो अगाडि…
काठमाडौँमा रोकिएनन् मेयरमा बालेन्द्र र उप-मेयरमा सुनिता हेर्नुस्…
मलाई सबै केटा मन पर्छ तर विप्लवको छोरा साह्रै मन पर्छ !
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २०, २०७८ समय: ०:०२:५५
गायिका ज्योति मगर समय–समयमा चर्चामा आइरहन्छिन् । स्टेज प्रस्तुति, कपडा पहिराई, विभिन्न पकृतिका अ’भिव्यक्तिलगायतका कारण उनी चर्चामा आइरहन्छिन् ।गायिका ज्योती नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो हा’उभाउको कारण बढी चर्चित छिन् ।
ज्योती मगरको पहिरन र हा’उभाउले बढी चर्चा पाउँछ । ज्योती गीत गाउँदा पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द बढी प्रयोग गर्छिन् । खुलेका पहिरन त उनको विशेषता नै हो ।विकट गाउँ रोल्पामा जन्मेर काठमाडौंमा संघर्ष गर्दै आफूले घर बनाएको कुरामा उनी गौरव गर्छिन् ।
काठमाडौंको कोटेश्वरमा उनले तीन तलाको भव्य विशाल घर बनाएकी छन् । अविवाहित गायिका मगरले अब बिहे गर्ने इच्छा पनि प्रकट गरेकी छन् । उनले आफुले घरज्वाँई बस्ने दु’लाह खोजिरहेको तर मन मिल्ने मान्छे नपाएको पनि उल्लेख गरिन् ।रमाइलो गर्दै उनले भनिन् घर भैसक्यो अब घरजम गर्ने तयारीमा छु ।
ज्योती मगर विशेषगरी उनका गीत र भिडियो अनि समय समयमा दिने बयानका कारण प्रायः चर्चामा रहने गर्छन् । नेपाली समाजले उनका धेरै गीतहरूलाई पा’च्य मान्दैन । दशकभन्दा लामो समयदेखि कलाकारीतामा सक्रिय उनले नाम र दाम दुवै कमाएकी छन् । उनै गायिका ज्योतिले ग्ल्या’मर गफमा बिप्लबका छोरालाई मन परेको बताएकी छन् ।भिडियो
Last Updated on: July 4th, 2021 at 12:02 am
८३३ पटक हेरिएको
सामाजिक संजालमा पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाको विरोध., चल्यो अनफलो अभियान(भिडियो सहित)
आफ्नो पक्षमा धेरै भोट आउन थाले*पछि हौसिँदै मतगणना*स्थल पुगिन् मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंह…
मिडिया*मा बालेन साह*को छोरी जन्मिएको समाचार, श्रीमती सबिना भन्छिन्–‘हाँस्दा–हाँस्दै मर्न लागेँ’…
ललितपुरमा- १० मा १० पटक वडाध्यक्ष बनेका व्यञ्जनकार यसपटक पराजित…
काठमाडौंको मेयरमा अग्रता लिइरहेका बेला बालेन पिता बने, श्रीमतीले छोरी जन्माइन्.., शुभकामना ।
यो नोट २ करोड १५ लाखमा बिक्यो.,यो नोट मार्फत उठेको पैसाले सहयोग गरिनेछ!(पढ्नुस पुरा)